Rooble iyo Qoor-Qoor oo Wadajir u booqday Dadkii ku dhaawacmay Wisil – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 28 June 2021 28 June 2021
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble & Madaxweynaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa wadajir u booqday Dadkii ku dhaawacmay Dagaalkii shalay ka dhacay Deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug.
Dhaqaatiirta iyo maamullada Goobaha Caafimaadka ee la dhigay Dadka ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ee Gobolka Mudug ayaa xaaladda Bukaannada la wadaagay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Axmed Qoor-Qoor.
Bukaannada oo qaarkood dhaawacyo daran jirkooda ka muuqda ayaa la dhigay Isbitaallada Muqdisho si looga daweeyo waxyeelada kasoo gaartay, waxaana xaalad xog dhageysi Caafimaad u tagay Ra’iisul Wasaaraha XFS & Madaxweyne Qoor-Qoor.
ilo xog ogaal ah ayaa Mustaqbal u sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble & Madaxweynaha DG Galmudug ay isla garteen in Caafimaad dibadda ah loo raadiyo bukaannada xaalad ahaan liita si looga daweeyo dhaawacyada soo gaaray.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada DG Galmudug ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Kaariye uu go’aamiyay duullaan ka dhan ah Al-Shabaab si looga hortago weerarada lamidka ah kii Wisil ka dhacay.
Dhimashadu waxa ay kor u dhaaftay 20-ruux halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay kadib markii Al-Shabaab weerar ku bilawday Gaari walxaha qarxa ay ku weerartay Deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug.
Ra’isul Wasaare Rooble oo Cali Guudlaawe ka qanciyay tabashada uu ka qabay shirka doorashooyinka